အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီး...
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ စက်ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန (လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ) ၀န်ကြီးရုံး မှ တာချီလိတ်၊ ကော့သောင်း၊ လားရှိုး၊ မြစ်ကြီးနားလေဆိပ်တို့တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ခရီးသွားဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ ဖတ်ရှုစစ်ဆေးနိုင်သော MRTDs ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ရန်န...
နမ့်စန်မြို့စည်ပင်သာယာရေးဌာနနှင့် ကျိုင်းတုံမြို့နယ် စည...
နမ့်စန်မြို့စည်ပင်သာယာရေးဌာနနှင့် ကျိုင်းတုံမြို့နယ် စည်ပင်သာယာ ရေးဌာနတို့မှ ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း (၂)ခုအတွက် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဌာန ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ နမ့်စန်မြို့စည်ပင်သာယာရေးဌာနနှင့် ကျိုင်းတုံမြို့နယ် စည်ပင်သာယာ ရေးဌာနတို့၏ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အပိုင်း (၂)တွင် ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။(က) နမ့်စန်မြို့၊ မြို့တော်ခန်းမတည်...
Posted Date :27-Feb-2019
ထန်တလန်မြို့ ရေပေးရေး (မြို့တွင်း ရေပေးရေးအပါအ၀င်) လုပ်...
ထန်တလန်မြို့ ရေပေးရေး (မြို့တွင်း ရေပေးရေးအပါအ၀င်) လုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (အောက်တိုဘာလမှ စက်တင်ဘာလအထိ) (၁၂)လ ဘတ်ဂျက် ချင်းပြည်နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ် ရေးဦးစီးဌာန ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေကျပ် (၁၂၀၀၀၀၀) သန်းနှင့် နတလဦးစီးဌာန ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေ ကျပ် (၆၀၀၀၀၀) သန်း စုစုပေါင်း ငွေကျပ် (၁၈၀၀၀၀၀)သန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် မြို့မှ (၂၂) မိုင် ကွာဝေးသော ခွေဗားရေထွက်မှ...
Expire Date :27-Mar-2019
ဟားခါးမြို့နယ်၊ ဘုံဇုန်းဒေသ (၄၂ ဒသမ ၆၈) စတုရန်းမီတာတွင်...
ဟားခါးမြို့နယ်၊ ဘုံဇုန်းဒေသ (၄၂ ဒသမ ၆၈) စတုရန်းမီတာတွင် ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ထုံးကျောက် စမ်းသပ်တိုင်းတာရေးနှင့် ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးဦးစီးဌာန သည် ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့နယ်၊ ဘုံဇုန်းဒေသ (၄၂ ဒသမ ၆၈) စတုရန်းမီတာတွင် ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်ရန်အ...
မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ကျွဲ၊ နွားများ အမှတ်အ...
မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ကျွဲ၊ နွားများ အမှတ်အသားပြုခြင်း စနစ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ကျွဲ၊ နွားများ အမှတ်အသားပြုခြင်း စနစ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသား ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်/ ကုမ္ပဏီများသို့ စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြချက် Expression of Interest (EoI) အဆိုပြုလွှာများ ခေါ်ယူထားသည်။ကျွဲ၊ နွား၊ တိရိစ္ဆာန်အမှတ်အသားပြုခြင်းနှင့် မွေးမြူရေးတိ...
Expire Date :21-Mar-2019